१७ बर्षमै विवाह गरेकि, २१ बर्षमा फेरि श्रीमानले अर्कि साैता भित्र्याएर कान्छीसँग मस्ती गरेपछि (भिडियो हेर्नुस्) – Taja Khawar
१७ बर्षमै विवाह गरेकि, २१ बर्षमा फेरि श्रीमानले अर्कि साैता भित्र्याएर कान्छीसँग मस्ती गरेपछि (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २३, २०७८ समय: १९:०४:४३
१७ वर्षमा बिबाह गरी छोरा जन्माए, २१ वर्षमा फेरि अर्को सौता भित्राएर कान्छीसँग मस्ती गर्ने श्रीमान सम्पर्कमा छोरा र श्रीमतिलाई आधिकार दिन तयार फनमा पर्यो चर्काचर्की। तपाइको दाम्पत्य जीवन सुखमय छ । खुसीसाथ दुबैले दाम्पत्य जीवन भोग गरिरहनुभएको छ । एकआर्काको भावना बुझ्नुभएको छ ।
आपसी साथ र सहयोगबाट घर-व्यवहार चलाउनु भएको छ । सबै कुरा ठिकठाक छ । यस किसिमको सम्बन्ध कायम गर्न के कुरा चाहिएला ? विश्वास, प्रेम, सद्भाव, सहयोग । हो, दाम्पत्य सुखका आधार हुन् यी । तर, यसमध्ये कुनै एक तत्वमा मात्र गडबडी भएमा तपाईंको दाम्पत्य उस्तै रहँदैन, जस्तो हिजोको दिनमा थियो । तपाईंको खुसी लुटिन्छ । तपाईको सुख हरण हुन्छ । तपाईंको सम्बन्ध दुई चिरा पर्छ ।
हिजोसम्म हाँसीखुसी बिताइरहेको दाम्पत्य जीवनमा आज अचानक कालो बादल मडारिन थाल्छ । किन यस्तो हुन्छ ? के घर-परिवारले गर्दा ? सत्रुले गर्दा ? छिमेकले गर्दा ? होइन, तपाईं भित्रकै कुरुप तत्वले गर्दा । त्यो तत्व हो, अविश्वास । श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विश्वासमा टिकेको हुन्छ ।
जबसम्म विश्वास हुन्छ, तबसम्म माया हुन्छ, एकअर्का बीच प्रेम हुन्छ, सहकार्य हुन्छ ।१७ वर्षमा बिबाह गरी छोरा जन्माए, २१ वर्षमा फेरि अर्को सौता भित्राएर कान्छीसँग मस्ती गर्ने श्रीमान सम्पर्कमा छोरा र श्रीमतिलाई आधिकार दिन तयार फनमा पर्यो चर्काचर्की बाकि भिडियोमा हेर्नुहोस्
Last Updated on: May 6th, 2021 at 7:06 pm